Fampidiran-drivotra Portable, fitaovana, Rafitra, Rafitra
Home / Ultrahigh Frequency Series / Fanamafisana Brazing azo entina azo entina
Sokajy: Ultrahigh Frequency Series Tags: HF milina fanodinana portable, milina fanosihosena finday, misolelaka portable, mpanelanelana azo entina, mpanelanelana amin'ny famonoan-tsofina, HF mandrobona fahana, fivarotan-tena mikotrika, mpanelanelana fampitaovana portable
Amin'ny hafanam-pandrefesana hatramin'ny 11KHz ^ 2.0MHz dia mety hifehezana ambany ny XMXXMHz ny haavony ary mety ho mora vinaingitra ny ampahany kely sy kely.
Nampiasaina ny IGBT sy ny teknolojia nampiova ankehitriny. Mihoatra ny fahamendrehana sy ny fihenan'ny fikojakojana.
Ny 100% cycle cycle, ny fiasana tsy tapaka dia mahazo alalana faran'ny herinaratra.
Ny fifandanjana eo amin'ny toerany na eo amin'ny toerany dia azo sokajiana mifanaraka amin'ny fahatratrarana ny fahamailana ambony;
Asehoy ny herin'ny hafanana sy ny fanamafisam-peo ary ny fihodinan'ny haavo.
Tsotra ny fametrahana, azo atao amin'ny tsy fahaizana manokana ny fanorenana;
Lanjany kely, vitsy kely;
Ny tombony amin'ny modely amin'ny timer: Ny hery sy ny fotoana fiasana amin'ny vanim-potoana fametrahana sy ny fe-potoana voatahiry dia azo ampiasaina, mba hahatsapana faingana ny fanamafisam-peo, ity modely ity dia soso-kevitra hampiasaina ho an'ny famokarana fandefasana mba hanatsarana ny fiverimberenana.
Ny singa tokana, 220V, 50-60HZ
ny fitsaboana hafanana ny fitaovana sy ny fitaovana.
fanasan-damba kely kokoa noho ny 1mm
Mirotsaka ho fialokalofana amin'ny institiota na fikarohana momba ny oniversite sy ny sisa.